लाहुरे केटो : कहिले नारायणघाट, कहिले दार्जिलिङ
हामीले बाँचेको बाल्यकाल र किशोरवय अहिलेका पिँढीले कहाँ र कसरी बाँच्न पाऊलान् र ! शायद यो पुस्तान्तरको सोचको परिणाम पनि हुनसक्छ । जे होस्, मानिसको हरेक पिँढीले फरक जीवन बाँच्छ । भलै तिनमा नगन्य समानता र धेरै पक्षमा असमानता हुन सक्छ । अथवा, यो भनाइको ठ्याक्कै उल्टो पनि हुन सक्छ ।
टाउकोमा पगरी (तरवान) लगाएका अनुहारमा लामो-लामो दाह्री र जुँगा पालेका पञ्जावीहरूले मात्र नेपालमा बस या ट्रक चलाउँछन् भन्ने मेरो बालमस्तिष्कमा परेको थियो । त्यस्तो बुझाइ मेरो मात्र हाेइन, शायद पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्गवरपर हुर्किएका त्यतिबेलाका बालबालिकाको दिमागमा पनि त्यस्तै परेको हुनुपर्छ ।
महेन्द्र राजमार्गको चन्द्रनिगाहपुर दुर्गाचोकमा वीरगञ्ज-जनकपुर, विराटनगर-काठमाडौं, विराटनगर-नारायणघाट, जनकपुर-काठमाडौं आउजाउ गर्ने नेपाल पब्लिक मोटर सर्भिसका बसहरूको नाम कराएर पढ्न सक्दा के के न गरेजस्तो लाग्थ्यो । त्यस्तो मनस्थिति एउटा बालकलाई पढ्न सक्ने योग्यता प्राप्त भएपछिको आनन्द पनि हुन सक्छ ।
जाडोयाममा वीरगञ्ज चिनी कारखानाका लागि ट्रक र लरीले उखु ओसार्थे । हामी साथीभाइ लाँक्राका लाँक्रा उखु चोरेर खान्थ्यौँ । वन जानु, मौसमअनुसारको जमुना, कुसुम, अमला, गुएँली, जिब्रेको साग, पटे र देउले च्याउ ल्याउनु हाम्रो एउटा अतिरिक्त मनोरञ्जन पनि थियो ।
कसैको उखुबारीभित्र पसेर लाँक्राका लाँक्रा उखु चाेरेर खानु, आँपको टिकुलिया चोरेर खानु र गर्मीयामको उखरमाउलो मध्याह्नमा भकुण्डो खेल्नु हाम्रा दिनचर्या थिए । त्यसमाथि वर्षायाममा कुलोमा भएका पोठिया, हिले, वाम (सर्पजस्तो अन्धो माछा) माछा मार्नु, गंगटा समाउनु र कुलोमा रहेको दुलोमा हात हालेर माछा वा गंगटा खोज्दा ढोडिया सर्प हातमा आएर डरले बेपत्ता कुद्नु हाम्रो बालापनका रमाइला क्षण थिए ।
किशोरवयमा एकपटक धुरूपको वनमा गुएँली खोज्न पुगेको थिएँ । साथी को को थिए, बिर्सिएँ । चैतको बेला वनभित्र छिरेका शिकारीहरूकाे ‘हैटहैट’ आवाज सुनेँ । त्यहाँ केही मानिस सिकार खेल्दै थिए । किनभने चैत/वैशाखको याममै गाउँलेहरू वनमा सिकार खेल्ने गर्थे ।
गुएँली खोज्दै थिएँ । अकस्मात् एउटा वीर बँदेल हामी भएतिर कुध्दै आयो । शिकारीले बिच्क्याएको वीरले हामीलाई लखेट्न आएको चाल पाएर बन्चरोले ढालिएका ठूलाठूला रूखका चार/पाँच फिट अग्ला जराहरूसमेत नाघ्दै हामी बेपत्तासँग कुद्यौँ । झण्डै ३ सय मिटर कुदियो होला । नवराज तिमल्सिना र मचाहिँ नदीको पानी थुनेर बनाइएको सानो पोखरीमा माथि डिलबाट हाम फाल्यौँ । त्यसरी ज्यान जोगाएको सम्झँदा अहिले पनि आङ सिरिङ्ग गर्छ ।
त्यस्तै, एकपटक आफूभन्दा धेरै जेठा क्षेत्रबहादुर ठाडा मगर (काले मगर) को अगुवाइमा सिकार खेल्न गएका थियौँ । शिकारी टोलीमा मंगलबहादुर ठाडामगर, नारायणबहादुर आलेमगर, डम्बरबहादुर खपाङ्गी, हस्तबहादुर बलामी मगर, रामजी पहरी र यो पंक्तिकार थियौँ । धुरुपको वनमा निक्कै भित्र छिरेपछि शिकारी टोली एउटा ठूलो ढोबीको छेउ पुग्यो । उखरमाउलो गर्मी थियो ।
वनका पतकर सुकेका थिए । सिकार झोर्नेहरूका पाइलाले थिच्दा पृथक् लयात्मक आवाज निस्कन्थ्यो तर हाम्रो शिकारी टोलीलाई लुकेर बसेका हरिण, चित्तल, कालिज र दुम्सी भाग्लान् भन्ने ठूलो चिन्ता थियो । ठूलो ढोबीमा सबैले सास रोकेर चियायौँ । त्यो ढोबी झण्डै २० वर्ग मिटरको हुँदो हो । एउटा ठूलो हरिण आराम गरेर बसेको रहेछ । हरिण २ सय ५० किलोग्रामजतिकाे हुँदो हो । हाम्रो खुसीको सीमा नै रहेन ।
सिकार खोज्न हिँडेको केही घण्टामै सिकार भेटिएकोमा हामी हर्कले गद्‌गद् थियौँ । म कालेदाइको छेउमै थिएँ । दाजुले निशाना लगाएर भरुवा बन्दुक चलाए तर बिडम्बना, बन्दुकले निशानामा लाग्नुको सट्टा कालेदाइको अनुहार मिस फायर भएको पोटासको कालोले डढायो । हामी सबैको सातोपुत्लो गयो । के गर्ने कसो गर्ने भन्ने अत्यासलाग्दो अवस्थामा पुग्यौँ । यसो हुनुमा पोटास, बन्दुकको छुसी र छर्राको समायोजन नमिलेर हो भन्ने ठहर गरियो । धेरै महिनापछि मात्र कालेदाइको अनुहारमा बलेको पोटासले पाेलेको दाग हरायो ।
हामी दुवै जना होटल बिसौनीमा भाँडा माझ्ने काममा लाग्यौँ । तेस्रो दिन होटल बिसौनीमा मेरा कान्छी सानिमा र सानोबुबा खाजा खान छिरेको देखेँ । उहाँहरूले देख्नुहोला भनेर छलिएँ । संयोगवश मैले देखे पनि उहाँहरूले मलाई देख्नु भएन ।
यस्तैयस्तै उटपट्याङ गर्दै बितिरहेको थियो किशोरकाल । छिमेकमा दाजु रमेशमोहन अधिकारीको घरमा हेटौँडाबाट फलफूल र जुसको व्यापार गर्ने पुडासैनी र लामिछानेको परिवार डेरा बस्नेगरी आइपुगे । मेरो उमेरसमूह मिल्ने नारायण पुडासैनी र रामेश्वर लामिछानेसँग सम्बन्ध झाँगियो । हुर्काइ, भोगाइ र देखाइका हिसाबले उनीहरू सहरबजार देखेका अनि धेरै चलचित्र हेरेका केटाहरू थिए । मेरा लागि उनीहरूको कुरा काल्पनिक, रोमाञ्चक र रुचिपूर्ण हुन्थे । यद्यपि बाहिरी पुस्तकहरूको अध्ययनको हिसाबले ती साथीभन्दा म निक्कै अगाडि थिएँ ।
तिनताक ६ कक्षामा पढ़दो हुँ । नारायण पुडासैनीले बेलाबखत घर छोडेर सँगै भाग्ने कुरा गरिरहन्थे । लाहुर जाने कुरा बारम्बार दोहोर्‍याइरहन्थे । उनको कुरा सुन्दासुन्दा लाहुरे हुने कल्पना र सपनामा म पनि विचरण गर्न थालेँ ।
गर्मीयाममा अन्यत्रझैँ हाम्रो जनज्योति माविमा पनि प्रातकालीन पढ़ाइ हुन्थ्यो । वसन्तपञ्चमी प्राविकी शिक्षिका मेरी आमा विद्यादेवी चापागाईंले १ सय रुपियाँको नोट दाजु, बहिनी र मेरो विद्यालयको मासिक शुल्क तिर्न मलाई दिनुभयो । एक्काईस रुपैयाँ चानचुन लाग्यो पढाइ महसुल । शुल्क तिरेपछि मसँग ७५ रुपैयाँ र चानचुन बाँकी थियो । विद्यालयबाट फर्किएपछि आफूसँग ७५ रुपैयाँ र चानचुन पैसा रहेको कुरा साथी नारायण पुडासैनीलाई भनेँ । त्यो थाहा पाउनेबित्तिक्कै पुडासैनीले घर छोडेर भागौँ भन्यो ।
आफूभन्दा ५ वर्ष जेठो साथी पुडासैनीले भनेको कुराले मलाई पनि घर छोडेर भाग्ने हुटहुटी जाग्यो । हत्त न पत्त म पनि बाहिर निस्कने कपडा लगाएर आएँ । गर्मीयाममा दक्षिण अमेरिकाली देशहरूझैँ दक्षिण एसियाली देशहरूमा पनि दिउँसो एक झप्की निदाउने प्रचलन अहिले पनि छ । मेरी आमा पनि उखरमाउलो गर्मीका कारण घरमा निदाइरहनुभएको थियो ।
बुबा शम्भुप्रसाद चापागाईं केही महिनाअघि हेटौँडा अवस्थित दि टिम्बर करपोरेसनको जागिर छोडेर ठेक्कापट्टामा लाग्नुभएको थियो । कान्छो मामा मुरारि पुडासैनीसँग संयुक्त लगानीमा पूर्व चताराको बराहक्षेत्रमा झोलुङ्गे पुल बनाउन त्यतै बस्नुभएको थियो । दाजु र बहिनी पनि निदाइरहेका थिए । मेरा लागि यो समय घर छोडेर भाग्ने उचित मौका थियो ।
म साथी नारायण पुडासैनीको लहैलहैमा लागेर आफ्नै दुर्गाचोक झरेँ । जीउ थरथर काँपिरहेको थियो । मुटुकाे ढुकढुकीकाे गति तीव्र भएको थियो । उखरमाउलो गर्मीमा मलाई जाडो लागेजस्तो भएको थियो । यो घर छोड्न लागेका कारणले मनमा त्रास, चिन्ता, लाज र डर वा त्यस्तै केही उत्पन्न भएकाे थियो ।
केही क्षणमै म र नारायण पुडासैनी दुर्गाचोकको पश्चिम दक्षिणपट्टि दि टिम्बर कर्पोरेसनका लामा-लामा र ठूल-ठूला गोलाइ बोक्ने प्याजी रङको मुखाकृति भएको जापानी हिनो ट्रक रोकिराखेको थियो । साथी नारायणले हेटौँडासम्म जान सिट खाली छ भनेर सोध्यो । आफ्नो बुबाले जागिर खाएर छोडेको कार्यालयको चालकले मलाई चिन्ला भन्ने चिन्ता लाग्यो ।
चिन्छ या चिन्दैन भन्ने जाँच्न मैले चालकको अनुहारमा हेरेँ । उसले नचिनेको भेउ पाएँ । बुबाको जागिर हुँदा हाम्रै घरवरपर तीन/चारवटा ट्रक र ट्रयाक्टर बिसाइराखेका हुन्थे । म पनि धेरै चालकलाई चिन्थेँ । उसले मलाई नचिनेको थाहा पाएर ढुक्क भएँ । दुई जनाको हेटौँडासम्मको भाडा १२ रुपैयाँ तय गरेर हामी गाडीकाे क्याबिनमा बस्यौँ ।
भाग्यवश अधबैँसे उमेरको चालक आफ्नै तनाव वा सुरमा भएकाले मलाई केही सोधेन । जे सोध्यो, मेरै साथीलाई सोध्यो । मलाई सोधेन । नारायण पुडासैनी हेटौँडाकै भएको हुनाले चालकले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिन उसलाई फिस्सै भएन । घाम पश्चिममा अस्ताउन तरखर गर्दै थियो । चराचुरुङ्गीहरू गुँडतिर फर्कंदै थिए । गोधुलीको दृश्य आनन्दजनक थियो । गर्मीले असिनपसिन भएर उसिनिएको आलुझैँ भएका थियौँ । निधार र अनुहारभरि आएको पसिना पुछ्दै हामी हेटौँडाको टीसीएन रोड झर्‍यौँ ।
हामी हेटौँडाबाट ज्यामिरे जाने रैथाने बस चढ्यौँ । नवलपुरमा झर्‍यौँ । अहिलेको सहिद स्मारकभन्दा उत्तरपट्टि रहेको नारायण पुडासैनीको घर पुग्यौँ । उसको हजुरबुबा मात्र हुनुभएको घरमा एक रात बितायौँ । भोलिपल्ट नारायणघाट जाने केटौले र उरन्ठेउले सल्लाहअनुसार बस पर्खेर बस्यौँ । तिनताक मुग्लिङ-नारायणघाटको सडक बनिसकेको थिएन । त्यसैले सडकमा गुड्ने सवारीसाधनहरूको संख्या पातलो थियो ।
बेखर्ची भएको मलाई प्रहरीले एउटा ट्रकमा कुरा मिलाइदिए । चन्द्रनिगाहपुरको दुर्गा चोक पुग्न केही किलोममिटर बाँकी हुँदो हो, अब मलाई घर छोडेर हिँडेकोमा लाज, धेरै पछुतो र ग्लानि महसुस भयो । त्यसकारण ट्रकमा बसेका अरु यात्रीले चाल नपाउने गरी रोएँ ।
वीरगञ्ज-नारायणघाट चल्ने एउटा पुरानो बस थाकेर लखतरान भएको बुढो गोरुझैँ क्लान्त मुद्रामा हाम्रो अगाडि आएर रोकियो । बसका पूरै सिट भरिएका थिएनन् । हामी दुई भाइ बसको मध्यभागको सिटमा बस्यौँ । झ्यालपट्टि म बसेँ । म कौतुहलता, डर, चिन्ता, साहस, त्रास र नयाँ ठाउँ देख्दा हुने आनन्दको बालइन्द्रेणी मनस्थितिमा थिएँ ।
बाटाेमा यात्रीहरू थपिँदै गए । सिटहरू भरिएर केही मानिस उभिएका पनि देखिन्थे । हामी टाँडी, भरतपुरहुँदै नारायणघाट पुग्यौँ । नारायणघाट बजार र बस्ती पातलो थियो । अहिलेको जस्तो भेउ पाइनसक्नुजस्तो गरी भद्रगोल पारामा फैलिएको थिएन । गोजीमा अलिअलि पैसा थियो । हामी रिक्सामा भरतपुर-नारायणघाट घुम्यौँ । त्यतिबेला बुटबल जाने सडकका लागि नारायणी नदीमा ठूलाठूला पिलरहरू बन्दै थिए । ठूला डुंगामा ट्रक र बसहरू हालेर बुटवल वा काठमाडौँ जाने नदी तारेको देखिन्थ्यो । बालापनको साहसिक घुमाइका रोमाञ्चक दृश्यहरू हेरेर रमाइलो अनुभव गर्‍यौँ ।
अब पर्‍यो फसाद ! गोजीमा भएको पैसा पनि सकियो, अब के गर्ने ? साथी नारायण पुडासैनीले काम खोजौँ भन्यो । तिनताक नारायणघाटबाट भरतपुर जाँदा देब्रेपट्टि होटल बिसौनी थियो । हामी त्यहाँ पुग्यौँ । साथीले काम सोध्यो । हामी दुवै जना होटल बिसौनीमा भाँडा माझ्ने काममा लाग्यौँ । तेस्राे दिन होटल बिसौनीमा मेरा कान्छी सानिमा र सानोबुबा खाजा खान छिरेको देखेँ । उहाँहरूले देख्नुहोला भनेर छलिएँ । संयोगवश मैले देखे पनि उहाँहरूले मलाई देख्नु भएन । बालमनमा एक किसिमको ग्लानि, घर छोडेको र पढाइ छुटेकोमा चिन्ता र भय उत्पन्न भयो ।
मैले साथीलाई भनेँ, 'म घर जान्छु ।’ उसले भन्यो, ‘पैसा छैन, कसरी जान्छस् ?’ त्यो प्रश्नको जवाफ मनमनै सोचेँ । जे त पर्ला ! वीरगञ्ज-हेटौँडा जाने गाडी चढ्छु । भोलिपल्ट बिहानै नारायणघाटबाट हिँडेरै भरतपुर पुगेँ । रामपुर, नारायणघाट, भरतपुर र भरतपुर बजार जाने चौबाटोमा पुगेँ ।
त्यहाँ एक जना प्रहरी चोकमा उभिरहेको देखेँ । हाने मर्छ, बोले टर्छ भनेझैँ प्रहरीको सहयोग लिने विचार गरेँ । ‘हेटौँडा जानुपर्ने, बेखर्ची भएँ । के गर्ने होला ?’, भैले भनेँ । ठ्याक्कै त्यही बेला हेटौँडा जाने ट्रक आइपुग्यो । प्रहरीले चालकलाई भने, ‘यो केटा बेखर्ची भएछ । यसलाई हेटौँडासम्म लगिदिनू ।’ चालकले सहमति जनाएपछि म ट्रकमा चालकपछाडिको सिटमा बसेँ ।
ट्रकमा अरु यात्रीहरू पनि थिए । भोकै प्यासै हेटौँडा पुगेपछि वीरगञ्ज जाने बसमा चढेँ । चुरियामाईको ओरालोमा कन्डक्टर पैसा माग्दै आइपुग्यो । डराई-डराई आफू बेखर्ची भएको पथलैयासम्म जान्छु भनेँ । ‘घरबाट भागेर हिँडेको थियो होला, बेखर्ची भयो नि’ भने कन्डक्टरले । तर, अरु केही भनेनन् । त्यसपछि म पथलैयामा ओर्लिएँ ।
पथलैया पुगेपछि घर नै पुगेजस्तो लाग्यो । अझ साहस बढ्यो । पूर्वतिर जाने सडकमा प्रहरी थिए । प्रहरीलाई आफू चन्द्रनिगाहपुर जानुपर्ने तर बेखर्ची भएको बताएँ । प्रहरीले एउटा ट्रकमा कुरा मिलाइदिए । चन्द्रनिगाहपुरको दुर्गा चोक पुग्न केही किलोममिटर बाँकी हुँदो हो । अब मलाई घर छोडेर हिँडेकोमा लाज, धेरै पछुतो र ग्लानि महसुस भयो । त्यसकारण ट्रकमा बसेका अरु यात्रीले चाल नपाउने गरी रोएँ ।
दुर्गाचोक पुगेपछि कसैले देख्ला कि भनेर लुसुक्क घरमा छिरेँ । बुबा चतारा बराहक्षेत्रबाट घर आउनुभएको रहेछ तर घरबाहिर जानुभएको थियो । बुबाको कुटाइ खाइने डरले मुटु धेरै ढुकढुक गर्‍यो । केही समयपछि बुबा आइपुग्नुभयो । बुबाले भन्नुभयो, 'लाहुरे आइपुगेछ । कहाँ गएको थिस् ?’ डरले पिसाब उम्केलाजस्तो भयो । रुँदै डराउँदै सबै बेली बिस्तार लगाएँ ।
अचम्म भो । बुबाले न एक थप्पड हान्नुभो, न त अघिपछिजस्तो गाली नै गर्नुभयो । बरु बुबाले ३ सय रूपैयाँ निकालेर बार्दलीमा रहेको सतिसालको टेबुलमा राख्नुभो । त्यसपछि भन्नुभयो, 'लु यो पैसा लिएर जा, तँलाई कताकता जान मन लाग्छ, त्यतात्यता जा । पुग्दैन भने ला यो पनि भनेर हजार रुपैयाँको नोट फाल्नुभो ।’
यसै त म लाज, ग्लानि, पछुतो र घर छोडेको पीडाले बेचैन थिएँ । टाउको फुट्लाजस्तो भो । ज्वरो आउलाजस्तो भो । गर्मीयामको त्यस्तै ३ बजेको हुँदो हो । भोक अत्यन्तै लागेकाे थियाे । मालदह आँप र चिउरा खाएर ओछ्यानमा पल्टेँ ।
दुर्गाचोक पुगेपछि कसैले देख्ला कि भनेर लुसुक्क घरमा छिरेँ । बुबाको कुटाइ खाइने डरले मुटु धेरै ढुकढुक गर्‍यो । केही समयपछि बुबा आइपुग्नुभयो । बुबाले भन्नुभयो, 'लाहुरे आइपुगेछ । कहाँ गएको थिस् ?’ मलाई डरले पिसाब उम्केलाजस्तो भयो । रुँदै डराउँदै सबै बेली बिस्तार लगाएँ ।
संगतगुनाको फल भनेझैँ भयो । आफूभन्दा पाँच वर्ष जेठो साथीको संगत गरेको परिणाम भोग्दै थिएँ । मलाई सामान्य र सहज हुन केही हप्ता लाग्यो । त्यसरी घर छोडेर हिँडाउने नारायण पुडासैनीसँग त्यसपछि जीवनमा कहिल्यै भेट भएन ।
चन्द्रनिगाहपुरमा पुस्तक, पत्रपत्रिका र स्टेसनरीहरू पाइने पसल थिएन । हामी केटाकेटी हुँदै बुबाले त्यस्तो पसल खोलेर पछि जागिर खान जाने भएपछि बन्द गर्नुभएको थियो । म ८ कक्षामा पढ़दै थिएँ । यो २०३९ सालको कुरा हो । घरमा फेरि स्टेसनरी, पुस्तक र पत्रपत्रिकाको पसल खोल्ने निधो भयो । दुर्गाचोकको दक्षिणपट्टि गौर जानेबाटोमा विदुर कार्की र उमेश श्रेष्ठकाे घरअगाडि ठूलो आकारको घुम्तीमा खुल्यो- विद्या मन्दिर ।
सरसामान किन्न कहिले हेटौँडा, कहिले वीरगञ्ज, कहिले जनकपुर त कहिले काठमाडौं गइरहनुपर्थ्यो । धेरैजसो बुबासँग जान्थेँ । कहिलेकाहीँ आफैँ एक्लै पनि सामान लिन जान्थेँ । अभ्यस्त भएपछि आफैँ एक्लै जान थालेँ । विद्यालयको नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुँदा अहोरात्र खटिनुपर्थ्यो । कुदाकुद, दौडादौडझैँ हुन्थ्यो ।
जे होस्, पसल राम्रै चलेको थियो । २०४२ सालमा एसएलसी दिएपछि कतै घुम्न जान पाए हुन्थ्योजस्तो लागेको थियो । सिन्धुली घण्टेको उद्धव राई (गाइने दनुवार राई) सहपाठी थियो । उसको घर बागमतीबाट निकै उत्तरमा अवस्थित राई गाउँभन्दा पारि घण्टेमा थियो ।
पसलबाट १ हजार रुपैयाँ सुटुक्क लुकाएँ । एउटा सानो भिर्ने झोला ठीक पारेँ । बुबाले चतारा बराहक्षेत्रमा झोलुङ्गे पुलको ठेक्का लिएर काम गर्दाताका सानोखाले भोजपुरे राम्रो खुकुरी किनेर ल्याउनुभएको थियो । त्यो खुकुरी झोलामा हालेँ । केही कपडा र दाँत माझ्ने मञ्जन-ब्रस हालेँ । विद्या मन्दिरको साँचो घरमा जिम्मा लगाएँ ।
त्यसपछि उद्धव राईसँग घुम्न साथ लागेर चन्द्रनिगाहपुरबाट बागमती जाने रैथाने बस चढेँ । यो २०४२ साल माघ महिनाको कुरा हो । बागमती पुलको पश्चिमपट्टिको बस बिसौनीमा झर्‍यौँ । नुनथरको बाटो बागमती नदीको किनारैकिनार हामी हिँड्यौ । बागमती नदीलाई पटकौँ तरेपछि उद्धव राई र म राईगाउँ पुग्यौँ । बाटाेमा उद्धव राईले चिनेका अनेकौँ गाउँलेसँग उसले 'क्षम कुशल' सोध्दै बाटो काट्यौँ ।
झण्डै ५ घण्टा लगातार हिँडेपछि हामी घण्टे पुग्यौँ । घण्टेमा कहिले बागमती नदीमा माछा मार्ने, कहिले गाउँको फेरो मार्ने र कहिले गाउँको चिया पसलमा चिया खाएर तीन दिन बिताएँ ।
त्यसपछि म घण्टेबाट ४/५ घण्टा हिँडेर बाग़मती पुल झरेँ । गोजीमा १ हजार रुपैयाँ थियो । घुम्न त जाने तर कता जाने भनेर निधो गरेको थिइनँ । साँझ परिसकेको थियो । बस बिसौनीमा अनेकन बस र ट्रकहरू आए । तर, कुनैमा पनि चढिनँ । काँकडभिट्टा जाने बस आएपछि भने त्यही बसभित्र छिरेँ ।
अब मनले निधो गर्‍यो । काँकडभिट्टा जाने, त्यसपछि दार्जिलिङ जाने । एक्लै छु । १६ वर्षे ठेट्नाे थिएँ । काल्पनिकीमा अनेकन कल्पना आउजाउ गरिरहेका थिए । दार्जिलिङ पुगेपछि गायिका अरुणा लामा, लेखक इन्द्रबहादुर राई, नीलो चोलीवाला सुवास घिसिङ र त्यतै कुनै विद्यालयमा पढ्ने नारायण उप्रेतीलाई अवश्य भेट्छु भन्ने सोच बनाएँ ।
काँकडभिट्टा झर्दा बिहानको ११ बजेको हुँदो हो । मेचीपारि पानी ट्याङ्कीमा सिलगुढी जाने रैथाने बस चढेँ । सिलगुढीबाट सानो रेलमा दार्जिलिङ जाने विचारमा थिएँ । तर, रेल साँझ ५ बजे मात्र जान्छ भन्ने थाहा पाएर बसमै दार्जिलिङ जाने विचार गरेर बस चढेँ ।
जाडोयाम, दार्जिलिङको यात्रा । तराईमा जाडोमा लगाउने स्वेटर र पातलो ज्याकेट मात्र थियो । भरखरको ठिटाे भए पनि बसमै जाडो लाग्न थाल्यो । बस कालिम्पाेङ पुग्यो । बस बाहिर पाका र ठिटाठिटीले चुङ्गी खेलेको देखेर मन धेरै रमायो । नेपालको बाइरोडको बाटोजत्तिकै घुम्ती र साँघुरो बाटोमा गुड्दै बस राति ८ बजेतिर दार्जिलिङको चौरस्ता पुग्यो । बसबाट झरेँ ।
यात्रीहरूलाई आफ्नो होटल, भोजनालय र लजमा लान निम्ता गर्ने र जबर्जस्ती गर्नेहरूको लर्को नै हुँदो रहेछ । म पनि एउटाको पछि लागेर गएँ । भोकले लखतरान परेको थिएँ । जाडो पनि कडैखालकाे थियो । खाना खाएँ । ५० रुपैयाँ तिर्ने गरी लजको साझा कोठामा सुत्न गएँ ।
चारवटा खाट राखिएको सुत्ने साझा कोठा रहेछ । मलाई देखाइएको खाटभन्दा पल्लो छेउको खाटमा एउटा ठूलो ज्यान गरेको मान्छे भित्तामा अडेस लागेर पल्टिरहेको थियो । हेर्दाहेर्दै उसले एउटा नयाँ नोट बेर्‍यो र झिलझिले कागजको माथि सेतो धुलो अलिकति राख्यो । त्यसपछि कागजको तल्लोपट्टि बलेको मैन बत्तीले सेक्न थाल्यो । झिलझिले कागजको माथि भएको सेतो पदार्थ बेरिएको नोटको दुलोबाट स्वाट्ट पार्‍यो ।
बुबाले न एक थप्पड हान्नुभो, न त अघिपछिजस्तो गाली नै गर्नुभयो । बरु ३ सय रूपैयाँ निकालेर बार्दलीमा रहेको सतिसालको टेबुलमा राख्नुभो । त्यसपछि भन्नुभयो, 'लु यो पैसा लिएर जा, तँलाई कताकता जान मन लाग्छ, त्यतात्यता जा । पुग्दैन भने ला यो पनि भनेर हजार रूपैयाँको नोट फाल्नुभो ।’
त्यो दृश्यको थालनीदेखि नै मलाई डर लाग्न थालिसकेको थियो । त्यो मान्छेको आकार प्रकार पनि यति भयङ्कर थियो कि काल्पनिक राक्षसजत्रो मान्छे भन्न मिल्ने थियो । त्यो मान्छेले मेरो अनुमानमा हिरोइन भनिने लागुपदार्थ खाएको थियो । कोठामा ऊबाहेक अर्को मान्छे पनि थियो ।
अर्को मान्छे सुत्ने तरखरमा थियो । त्यो भयङ्कर मान्छेले मलाई सोध्यो, 'तँसँग कति पैसा छ ? तँ काम खोज्न दार्जिलिङ आएजस्तो छ । म तँलाई काम खोजिदिन्छु । तँसँग भएको सबै पैसा भोलि बिहानै मलाई दे । म तँलाई काममा लगिदिन्छु ।’ उसको कुरा सुनेपछि मेरो किशोर मनस्थिति साह्रै डरायो । डरले मैले पनि हुन्छ भनेँ ।
अब निदाउनुअघि नै एउटा योजना बनाएँ । म दार्जिलिङमै बसेँ भने त्यो मान्छेले मलाई जहाँ भए पनि फेला पार्छ । अनावश्यक दुःख र चंगुलमा फसिन्छ । ज़िन्दगी नै बर्बाद हुन्छ । कहाँ दार्जिलिङ घुम्न आएको मान्छे कहाँ यस्तो नचाहिँदो मान्छेका कुरामा लाग्नु ? दार्जिलिङको जाडोले यसै पनि मेरो सातो गइसकेको थियो ।
निधो गरेँ- भोलि बिहान सखारै त्यो दुष्ट मान्छेभन्दा अघि नै उठ्छु र बाहिर निस्कन्छु ।
मस्त निदाएर उठ्दा बिहानको ५ बजेको हुँदो हो । त्यो २८ वर्षजतिको उमेर भएको दुष्ट सुतिरहेको थियो । चाल मारेर बिहानको आफ्नो सबै नित्यकर्म सकेँ । त्यसपछि बाहिर निस्केँ । चौरास्तामा बस लागिरहेको रहेछ । सहचालकले सिलगडी भनेर भट्याइरहेको थियो । म बसभित्र छिरेँ । बस बिस्तारै ओरालो झर्न थाल्यो । उक्लनु, ओर्लनु र फेरि उक्लिनु त रहेछ जीवन ।
अचेल आफ्नो उट्पट्याङ सम्झिन्छु । आफूलाई हेर्दै आफैँ एक्लै हाँस्छु । हाँसिरहनुपर्छ । हाँस्न छोड्नु हुन्न, जीवनका उकाली ओरालीहरूमा ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन १५, २०७७, ०६:१४:००